Abavelisi bebhotile ye-jack ebalaseleyo kunye neejacks zathengiswa | I-Epont Jack
Isatifikethi sethu (i-Epont Jack) isiqinisekiso seNkqubo yokuLawulwa kweNdawo yokuLawulwa kweNdawo yokuLawulwa kweNdawo yeSizwe kunye ne-ISO 3949: 2009, iBhotile yethu ye-Hydraulic jack, yomgangatho igqithile kwi-CE, GS&Isatifikethi sophuhliso lwe-TUV, sinamaqela ophuhliso lobungcali esinokuthi ngoku ngokweemfuno zabathengi bethu ukuze siyilo, umatshini wokulinganisa, umatshini wokuvavanya, I-Rockwell Hester, Yaskawa Robot Welding, ukuKhangela kunye nokuSebenza kweziBonelelo zeNkampani, ukuvumela umgangatho wenkampani (ibhotile ethembekileyo), i-jack ye-jack ye-jack, ngokukodwa ukufunyanwa kwe-laser umatshini ukuqinisekisa ukuchaneka kokubekwa, umngxunya womda, ukuze umgangatho wemveliso uye waxhuma.
I-Wittle jack i-12 ngexabiso elifanelekileyo - i-epont
I-Epont ithumela i-whotelel jack ye-12 ngexabiso elifanelekileyo - i-epont ithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-30, e-Itali, e-Australia, eCanada, eCanada. Ingcali ngoololiwe, iimoto, oomatshini bokwakha, sele siba nentsebenziswano engaphezulu kwe-10 yehlabathi € ™ i-5 yehlabathi €
Umgangatho ophezulu we-jack 3t ithumele i-Wholelele -y-Zhejiang Yuipeng Matshini CO., Ltd
I-Epont ephezulu kumgangatho we-jack 3t ithumele i-Wholedale-I-Zhejiang Yuipeng Morry County. Bandakanya abathengi abaninzi be-OEM OBALASELEYO KUPHEPHA LWEZIFUNDO, IIMPAWU ZOSEKO ZOKWENZIWA KOKUGQIBELA
Ibhotile yesiqhelo yebhotile ye-hydraulic jack
Ibhotile yesiqhelo yebhotile ye-hydraulic jack.Akukho kuphika ukuba le mveliso inefuthe elihle kwimood kwaye ibonelele ukuphumla, ngakumbi isiphazamiso sokulala kunye nentloko.Imveliso inomgangatho omkhulu womhlaba. Ukutshatyalaliswa komphezulu awuyi kuba lula ukunxiba ezinjengee-rocks, ii-istches, imingxunya okanye ikwaphukile.Olu hlobo lwebhedi lunokunceda umntu ukuba alale kakuhle ebusuku, onceda ekuphuculeni imemori kwaye aphucule amandla okugxininisa.
I-Epsunt yoMgaqo yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, phantsi i-jack ye-3T, yomgangatho wokuhambisa i-jack eyishishini elikhethekileyo lophando, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso.1. Sineziqinisekiso zemfundo: Sinesatifikethi semfundo esisesikweni2. Itekhnoloji yeMveliso: Uphando oluqhubekayo kunye nezinto ezintsha3. Ukoneliseka kwabathengi: Nika imveliso eyoneleyo
Imodeli yesampulu ye-jack
Imodeli yesampulu ye-jack.Zonke izixhobo zokuhlangabezana nemigangatho yehlabathi.
Ibhotile jack 16T
Ibhotile jack 16T, iimveliso zethu zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono
Umgangatho jack 3t
Umhlaba wethu jack 3T, umgangatho ophezulu, iimveliso zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono
Ibhotile jack 32t
Ibhotile yethu jack 32t, umgangatho ophezulu, iimveliso zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono
Iimveliso zethu zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye r
Iimveliso zethu zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono
I-Toe Je Jack, iimveliso zethu zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono
Umgangatho we-2.5T jack esezantsi
Umgangatho oPhakamileyo we-2.5T jack, iimveliso zethu zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono